उफ यो भ्रष्टचार ! - Mero Tribune
Home BIG PICTURE उफ यो भ्रष्टचार !
उफ यो भ्रष्टचार !
भ्रष्टाचार नेपालको मात्र होइन, विश्वव्यापी समस्या हो । अरू विकसित, विकासोन्मुख मुलुक र नेपालमा केवल एउटा मात्र फरक छ— ती देशमा भ्रष्टाचार कम र काम बढी हुन्छ, तर यहाँ भ्रष्टाचार बढी अनि काम निकै कम हुन्छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायतजस्ता देशहरूमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, तर त्यहाँ विकासका काम तीव्र रूपमा अघि बढ्छ ।
तर नेपालमा भने त्यस्तो छैन । यहाँ भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । देशको आर्थिक उन्नति नहुनुको पछाडिको मुख्य कारकतत्व भनेकै यहाँ मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार हो । केही अपवाद छोडेर यहाँ सरकारी निकाय र अन्य क्षेत्रमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म कर्मचारी कुनै न कुनै रूपले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् ।
हामी भ्रष्टाचारी पक्राउ परेको समाचार दिनहुँजसो अखबारहरूमा सुन्न पाउँछौँ । सेवाग्राहीबाट कर्मचारीले घुस लिएको घटना धेरै सुन्न पाउँछौँ । ती त भए हामीले प्रत्यक्ष देखेका र सुनेका भ्रष्टाचारका घटना । भ्रष्टाचारको जालो विशाल छ । यसको कुनै दायरा छैन । सरकारी कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि भ्रष्टाचारको जरा बलियो छ ।
एक दिन म र एकजना साथी खाजा खाँदै थियौँ । उनी सरकारी कर्मचारी हुन् र अहिले अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । त्यत्तिकैमा उनको फोन बज्यो र उनी त्यसमै व्यस्त भए । फोनमा कुराकानी सकेपछि उनको मुहार केही मलिन भयो । मैले सोधें, ‘कसको फोन हो, के भयो र ? ‘ सुरुमा त उनले भन्न मानेनन् तर मैले नै कर गरेपछि मात्र भने, ‘को हुनु, मेरो हाकिम नि, अब कार्यमूल्यांकनको लागि अंक थप्नुपर्ने, घुस मागे । अब त्यो पैसा कहाँबाट मिलाउने होला । पैसा नै नदिउँ त, अंक नै थप्दिँदैनन् ।’
मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय जस्ता सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको पाइएको छ । त्यहाँका कर्मचारी पैसा खानकै लागि काममा ढिलासुस्ती गर्छन् । एउटा सानो काम गर्न पैसा नख्वाउने हो भने एक हप्तै लगाइदिन्छन् । जति धेरै पैसा दियो, काम पनि त्यति नै छिटो हुने गर्छन् ।
त्यस्तै न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र अन्य थुप्रै निकायमा भ्रष्टाचारका घटना सुन्न पाइन्छ । अस्ति एकजना दाइ भन्दै थिए, ‘आजभोलि त रिचार्ज कार्ड किन्न ट्राफिक प्रहरीकहाँ जानुपर्छ ।’ मैले किन भनेर सोधेँ, ‘आजभोलि उनीहरूसँग रिचार्ज कार्ड यति धेरै हुन्छ, कतिपयले त पसलको भन्दा सस्तोमा अरूलाई बेच्छन् । उनीहरू ट्राफिक नियम पालना नगर्नेसँग सोझै पैसा माग्न हिच्किच्याउँछन् । त्यसैले रिचार्ज कार्ड माग्छन् ।’
यो सबैमा लागू नहोला तर भ्रष्टाचार त्यहाँ पनि मौलाउँदै गएको छ । हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन । कुनै विकासका आयोजनाका निम्ति बजेट त छुटिन्छ, तर त्यो बजेटमा हानथाप र घोटाला प्रशस्त हुन्छ । कुनै बाटो बनाउनु छ भने त्यसको लागि बजेट छुट्टिन्छ, तर त्यो बजेटको अधिकांश हिस्सा एकअर्कामा बाँड्दैमा सकिन्छ । फलस्वरूप बाटो त बन्छ, तर निकै कमसल, एक महिनामै भत्किन सुरु गर्छ ।
बाटो पिच त हुन्छ, तर भोलिपल्टदेखि नै उप्किन थाल्छ । केही विकास आयोजना त बजेट आपसले सिध्याएर बीचमै अलपत्र छोडिन्छ । अरू विभिन्न आयोजनाको हविगत यस्तै हुन्छ ।
यही वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणात्मक सूचकका (सीपीआई) अनुसार नेपाल २७ अंकका साथ १३० औँ स्थानमा पुगेको छ । पछिल्लो वर्ष नेपाल २९ अंकका साथ १२६ औँ स्थानमा थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपाल द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानभन्दा एक स्थान माथि छ ।
भ्रष्टाचार विश्वभर छ । नेपालले पनि भ्रष्टाचार छ । यसलाई कम गर्न सम्बन्धित निकाय र पक्षले चुस्तदुरुस्त काम गर्नुपर्‌यो । सबै निकाय र व्यक्तिले इमानदारीपूर्वक काम गरिदिए भ्रष्टाचार कम हुनेमा दुईमत छैन ।
त्यस्तै दक्षिण एसियमै नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशमध्ये तेस्रोमा पर्छ र विश्वमै हेर्ने हो भने नेपाल बढी भ्रष्टाचार गर्ने देशहरूमा पन्ध्रौँ स्थानमा पर्छ । भ्रष्टाचार मौलाउनु र नियन्त्रणमा आउन नसक्नुको पछाडि कमजोर नेतृत्व र सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु हो ।
घुस लिने र दिने परिपाटी नै बसिसकेको छ नत्र कुनै काम नै बन्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारको चपेटामा परेको छ । सरकारी कार्यालयबाट एउटा सानो काम गराउन पनि पैसाको आवश्यकता पर्छ नत्र त्यो कामले प्राथमिकता पाउँदैन । भ्रष्टाचार बढ्नुमा मानिस पनि उत्तिकै दोषी छन् । यहाँ शिक्षा क्षेत्र बढी भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ ।
मानिस आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर बनाउन जति नि पैसा दिन्छन् अनि लिनेले पनि किन नलिनु ? हरेक मानिस सचेत भए र घुस माग्ने मानिसमा पनि आफ्नो नैतिकता नहराए भ्रष्टाचार कम हुने थियो । तर यी हुन गाह्रै छ । सम्बन्धित निकाय र सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत भए भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाउने थिएन ।
भ्रष्टाचार विश्वमा फैलिएको रोग हो । अरू देशहरूले यसमाथि जित हासिल गरेर आर्थिक उन्नतितर्फ लम्किरहेका छन् । त्यसका लागि सुदृढ सरकार, राजनीतिक इच्छाशक्ति र आम मानिस सचेत हुन जरुरी छ । ६० र ७० को दसकमा हङकङमा अहिलेको नेपालभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, तर अहिले हङकङ विश्वमै कम भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ ।
हङकङमा पनि अख्तियारजस्तै एक निकायले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले गर्‌यो, फलस्वरूप आज हङकङ त्यो स्थान प्राप्त गर्न सफल भयो । त्यस्तै १८ को दसकतिर बेलायतमा नेपालभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार व्याप्त थियो । एक लेखमा उल्लेख भएअनुसार सन् १६६० देखि सन् १७९० सम्म बेलायतमा चुनाव जित्न र सरकार बनाउन पनि घुस नै चाहिन्थ्यो । तर बेलायत भ्रष्टाचारविरुद्ध अनेक कदम चाल्दै गयो र आज कम भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ ।
त्यस्तै विभिन्न अफ्रिकन मुलुकमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि उल्लेख्य प्रगति भइरहेका छन् । ती देश गरिब हुनुमा भ्रष्टाचार नै एक प्रमुख कारकतत्व हो । ती देशहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको युद्ध जारी राखेका छन् । रुवान्डा अहिले अफ्रिकाकै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ ।
त्यहाँ सरकारी निकायले आफ्नो हरेक काम पारदर्शी ढंगले गर्छन् र त्यहाँ विधिको शासन स्थापित छ । त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही होस्, सजायको हकदार हुन्छ । त्यस्तै नाइजेरियामा पनि त्यहाँका नयाँ राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम अवलम्बन गरेका छन् । नत्र एक अध्ययनअनुसार नाइजेरियाले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत भ्रष्टाचारमै गुमाउँथ्यो ।
भ्रष्टाचार विश्वभर छ । नेपालले पनि भ्रष्टाचार छ । यसलाई कम गर्न सम्बन्धित निकाय र पक्षले चुस्तदुरुस्त काम गर्नुपर्‌यो । सबै निकाय र व्यक्तिले इमानदारीपूर्वक काम गरिदिए भ्रष्टाचार कम हुनेमा दुईमत छैन । यहाँ त पदमा पुग्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार सुरु भइहाल्छ । बरु भ्रष्टाचारै गरे पनि कम गर्नु र काम बढी गर्नु नि । तर यहाँ त ठीक विपरीत हुन्छ– काम कम भ्रष्टाचार ज्यादा । भ्रष्टाचार कम नगरी जति नै ठूला सपना देखाए पनि र भाषण गरे पनि देशको आर्थिक उन्नति असम्भव छ ।
Previous articleHimalayas Calling (VIDEO)
Next articleImportance of Education